“Guul-darrada PSG Waxay Saamaysaa Gogoshayada, Waanu Iga Fogaadaa” – Cadalol.net
Wanda Nara oo ah xaaska iyo wakiilka weeraryahanka kooxda kubadda cagta PSG ee Mauro Icardi ayaa shaacisay in guul-darrooyinka soo gaadha kooxdaasi ay saamayn ku yeeshaan noloshooda gaarka ah ee guriga, isla markaana aanay gogosha wadaagin habeenka laga badiyo.
Icardi oo ay da’diisu tahay 27 jir waxa uu bishii May ee sannadkan si rasmi ah uga mid noqday PSG oo uu amaah ugu ciyaaray sannadkii hore, waxaanay kooxda reer France kasoo bixisay £54 milyan oo Gini oo ay kagala soo wareegtay Inter Milan.
Sannadka uu joogay PSG, waxa uu u ciyaaray 34 kulan oo dhamaan tartamada ah, waxaanu u dhaliyey 20 gool iyo afar gool oo kale oo uu caawiye ka noqday, isaga oo la qaaday saddexda koob ee dalkaas laga ciyaaro.
Sannadihii ugu dambeeyey, waxa marar badan warbaahinta qabsatay xaaskiisa Wanda Nara oo hadallo muran dhaliyey ka sheegtay warbaahinta, waxaana ay ugu dambayn bannaanka keentay noloshooda gaarka ah ee gudaha gurigooda iyo hab-macaamilkooda.
Wanda Nara oo hore u ahayd gabadh dharka xayaysiisa, sidoo kalena barnaamij tabiye ka ahayd telefishan, ayaa u warrantay wargeyska Repubblica delle Donne, waxaanay ka sheekaysay saamaynta ay guul-darrooyinka PSG ku yeeshaan, waxaanay tidhi: “Ma garanayo waxaan sheego. Haddii aanay kooxdu guuleysanin, xattaa dhinacayga masoo eego.”
Mauro Icardi ayaa Inter Milan uga yimid isfahan-darro u dhaxaysay isaga iyo tababare Antonio Conte, waxaase uu dib ugu helay kalsoonidii iyo fursadihiisiiba PSG, inkasta oo aanu joogin kulankii xamaasadda badnaa ee Marseille ee xalay.